Siday usoo dhaweeyeen Ronaldo, Messi, Hazard iyo kuwa curashada 2018-ka,+sawirro - Jazeera FM
Siday usoo dhaweeyeen Ronaldo, Messi, Hazard iyo kuwa curashada 2018-ka,+sawirro
Cristiano Ronaldo ayaa sanad Ciyaareedkii tagay ee 2017 uu ahaa mid aad u wanaagsan, kaddib markii uu ku guulaysta tartamada Champions League, La Liga, FIFA Club World Cup iyo si la mid ah abaalmarinta Ballon D’Or markiisii shanaad.
Kabtanka Xulka qaranka Portugal iyo Kooxda Real Madrid Ronaldo ayaa la dabaal degay qaar ka mid ah qoyskiisa sida Hooyadiis, Aabihiis, walaalihiisa iyo Gacalisadiisa Georgina Rodriguez.
Lionel Messi ayaa sanadki lasoo dhaafay la aqal galay gacalisadiisa mudada dheer ay wada socdeen ee Antonella Roccuzzo, taas oo ugu danbayntii noqotay Xaaskiisa bishii June 2017-kii.
Ciyaaryahankii hore ee Kooxda Barcelona Neymar JR ayaa sidoo kale qayb ka ahaa Xirfadlayaasha Kubada Cagta ee soo dhaweeyay curashada sanada cusub ee 2018-ka, isagoo waqti siiyay jacaylkiisa iyo qoyskiisaba, xilli baraha bulshada uu soo dhigay sawirro badan uu ugu dabaal degaayo sanada cusub ee 2018.
Conor McGregor oo la ogson yahay in uu kal hore la feertamay Feeryahanka qarniga ee Floyd Mayweather ayaa si wada jir ah ugu dabaal degay sanada 2018-ka.
Feeriryahanka reer Maraykan ee Floyd Joy Mayweather Jr oo jooga wadanka Australiya ayaa bartiisa bulshada ee Instagram-ka kula wadaagay hambalyada sanada cusub, isagoo la il daran xanuunka sababa fayruuska dhaliya caabuqa hargabka .
Laacibiinta Kooxda Manchester City iyo Xulka Qaranka Argentina ee Nicolas Otamendi iyo Sergio Aguero oo la jooga hal meel ayaa si wada jir ah u wada xusay 2018.
Weeraryahanka Chelsea Eden Hazard ayaa sidoo kale sanadkii tagay la arkay isaga iyo qoyskiisa oo ah seddexda wiil oo ay walaalo yihiin kaas oo khadka dhexe ugu ciyaara Kooxda Bundesliga ee Borussia Monchengladbach Thorgan Hazard, Kylian Hazard iyo Ethan Hazard.
Afarta Nin ee isla dhalatay ayaa mid walba farta ku haya hal lambar taasoo muujinaysa in si wada jir ah ay u xuseen sanada 2018.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Ivan Rakitic ayaa sidoo kale waqti qurxoon oo farxad leh la qaatay xubno ka tirsan qoyskiisa, gaar ahaan xaaskiisa Raquel Mauri.
Weeriryahanka Kooxda Chelsea Alvaro Morata iyo Xaaskiisa cusub ee Alice Campello oo sanadii tagtay 2017 ku aqal galay magaalada Vinece ee dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale qayb ka ahaa shaqsiyaadkii sida wayn usoo dhaweeyay curashada 2018, kuwaas oo ugu dabaal degay Koofiyadaha ay qaadan jireen boqoradii hore iyo Ookiyaalo wayn.
Xiddiga Kooxda Liverpool Philippe Coutinho ayaa sidoo kale u dabaaldagay sannada cusub ee 2018-ka, kaas oo laga yaabo in uu u dhaqaaqayo Barcelona, iyadoo Nike ay si hoose u soo bandhigay maaliyada magaca Barca, isagoo waqti siiyay Xaaskiisa iyo gabadhiisa.
Roberto Firmino iyo gacalisadiisa Larissa Pereira ayaa sidoo kale u xusay curushada 2018-ka.
Weeriryahanka Kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski iyo xaaskiisa Anna ayaa si qurux badan u sagootiyay sanadii tagtay ee 2017, xilli ay si wayn usoo dhaweeyeen iyagoo jooga Abu Dhabia.
Goolhayaha Kooxda Porto Iker Casillas iyo xaaskiisa Sara Carbonero oo ah gabar saxafiyad ah ayaa sidoo kale ka mid ah kuwa sida wayn u xusay qoys ahaan iyaga iyo caruurtoda.
Garablaha Kooxda Everton Kevin Mirallas oo xitay Jaakad casaan isaga iyo labadiisa Caruur ah ayaa sheegay in rajadiisa ay tahay in Xulkiisa Belgium-ka uu kala qeybgalo Cayaaraha Koobka Aduunka ee bartamaha sanad cusub 2018-ka lagu qaban doono Ruushka.
The post Siday usoo dhaweeyeen Ronaldo, Messi, Hazard iyo kuwa curashada 2018-ka,+sawirro appeared first on Goolasha.net.
← Ronaldo oo xanbaaray calanka Somaliyeed ?
Report: Bayern Munich oo isaga hartay Jurgen Klopp →